भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ऐनमा के थपियो के खारेजी ? - Dainik Nepal
भदौ १ देखि लागू हुने मुलुकी अपराध ऐनमा के थपियो के खारेजी ?
विवाह र दाईजो सम्बन्धी व्यवस्थामा हेरफेर, २० वर्ष नपुगी बिहे गरे ३ वर्ष कैद
दैनिक नेपाल २०७५ साउन २४ गते १६:१०
काठमाडौं, २४ साउन । नेपालका कानुन समय सान्दर्भिक छैनन् भन्दै कतिपय अवस्थामा आलोचना नै पनि भएका पाईछन् । हुन त नेपालका कतिपय कानुन भएरै पनि कार्यान्वयन हुन सकिरहेका छैनन् ।
यस्तो अवस्थामा कतिपय पुराना व्यवस्थालाई आधुनिकता दिँदै लागू हुन लागेको नयाँ कानुन हो– मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन २०७४ ।
यो ऐन लागू भएपछि विशेषतः तराई क्षेत्रमा ब्याप्त दाईजो सम्बन्धी सामाजिक समस्या दण्डनिय बन्न सक्ने देखिन्छ । उक्त कानुनमा विवाह सम्बन्धी पनि कतिपय व्यवस्थामा आधुनिक बनाउन खोजिएको छ ।
हालसम्म प्रचलनमा रहेको संहिता कानुन मुलुकी ऐन २०२० दाइजो माग्नेविरुद्ध कारवाहीको व्यवस्था नै गरिएको थिएन ।
विवाह गरिसकेपछि दाइजो वा सम्पत्ति मागेमा वा त्यसको निहुँमा दुलही वा उसको नातेदारलाई हैरानी दिएमा, सताएमा ५ वर्षसम्म कैद र ५० हजार रुपैयाँसम्म कारवाहीको व्यवस्था गरिएको छ ।
ऐनमा विवाहित पुरुषलाई बहुविवाह गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यदि विवाह गरेमा त्यस्तो विवाह स्वतः बदर हुनेछ अर्थात त्यसले कानुनी मान्यता पाउन सक्ने छैन र बहुविवाह गर्ने पुरुष कारबाहीको भागीदार बन्नेछ ।
यस्तै विवाह सम्बन्धी अर्को व्यवस्थामा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष किटान गरिएको छ । यदि २० वर्षअघि विहे गरेमा वा गराएमा त्यस्तो विवाह बदर हुनेछ । विहे गर्ने र गराउनेलाई ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँसम्म जरिवानाको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
तर आधुनिक वा परम्परासँग मेलखाने प्रकृतिको बनाउन खोजिएको विषय हाडनातासँगको विवाह हो ।
नेपालमा कतिपय आदिवासी जनजाति समुदायमा हाडनाताभित्रै विवाह गर्ने प्रचलन रहेको छ । तर, हालसम्म प्रचलनमा रहेको मुलुकी ऐन २०२० ले हाडनाता विवाहमा प्रतिबन्ध नै लगाएको थियो ।